Wararka Suuqa Kala Iibsiga Ee Laga Qoray Kevin De Bruyne, Andrea Belotti, Yangel Herrera, Zlatan Ibrahimovic, Iyo Lukaku
Home Wararka Ciyaaraha Wararka Suuqa kala iibsiga ee laga qoray Kevin De Bruyne, Andrea Belotti,...
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 8 April
Manchester United ayaa dooneysa inay si buuxda uga faa’iideysato rabitaanka West Ham ee ah inay soo iibsato Jesse Lingard xagaagan, waxaana ay dul dhigtay madaxa weeraryahan 30 milyan oo ginni ah ($ 41m), sida ay qortay Mirror .
Manchester City ayaa isku dayi doonta inay heshiisyo la saxiixato weeraryahanada Raheem Sterling iyo Phil Foden ka hor dhamaadka ololahan xili heshiis ka saxiixeen Kevin De Bruyne , Eurosport
Labada kooxood ee Roma iyo AC Milan ayaa doonaya inay la soo saxiixdaan weeraryahanka Torino Andrea Belotti, Corriere dello Sport ,
Manchester City ayaa isha ku heysa xiddiga amaahda ugu ciyaara Granada ee Yangel Herrera iyadoo ay macquul tahay inay xilli ciyaareedka soo socda keenaan kooxda koowaad ee Pep Guardiola. Goal
Tottenham ayaa xoojisay baacsiga ay ugu jirtay daafaca dambeedka dhexe ee kooxda Southampton Jannik Vestergaard, sida ay qortay Express .
Arsenal ayaa dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay xiddiga Crystal Palace Wilfried Zaha, sida laga soo xigtay 90min .
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Manchester United iyo Chelsea Lucas Vazquez ayaa meesha ka saaray wararka xanta ah ee ku aadan suuqa kala iibsiga isagoo sheegay inuu waligiis ahaan doono xidig Real Madrid ah. Goal
Chelsea ayaa qorsheyneysa inay heshiis xagaaga la gasho weeraryahanka Inter Romelu Lukaku – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Qeybta Hore Suuqa kala iibsiga 8 April
Arsenal ayaa diyaar u ah inay iska iibiso Alexandre Lacazette – sida laga soo xigtay 90min.
Tababare Zidane Zidane ayaa albaabka u furay suurtagalnimada uu ugu laaban karo kooxda Juventus iyada oo cadaadiska wali ku sii kordhayo tababaraha haatan ee Andrea Pirlo. Goal
Radu Dragusin ayaa qarka u saaran inuu heshiis cusub u saxiixo Juventus, sida ay xaqiijisay Goal .
Manchester City ayaa isha ku heysa inay u dhaqaaqdo xiddiga Sheffield United Sander Berge, sida ay qortay Voetbal24 .
Zlatan Ibrahimovic ayaa wadahadal kula jira kooxda AC Milan oo ku aadan heshiis cusub, sida ay baahisay BBC-da .
Barcelona ayaa u soo bandhigtay daafaca Manchester City Eric Garcia heshiis mushaar dhimis ah , sida ay qortay Marca .
Ku biiritaanka Georginio Wijnaldum ee kooxda Barcelona ayaa wax yeelo u geysan karta qaab ciyaareedka liita oo uu soo bandhigay talaadadii markii uu joogay Real Madrid, sida laga soo xigtay Marca .
Barcelona ayaa isha ku heysa inay heshiis la gaarto Ousmane Dembele iyadoo qandaraaska u kordhin doonta ilaa 2025, sida laga soo xigtay Sport .
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Bayern Munich Hasan Salihamidzic ayaa xaqiijiyay in Jerome Boateng uu ka tagi doono kooxda xagaagan. Goal
Previous articleFalanqeynta Kulamada: Arsenal Vs Slavia Prague, Granada Vs Manchester United ee UEFA Europe League
Next articleChelsea oo kula soo wareegi karta Andrea Belotti £ 21.6m xagaagan’